पढेका कुरा ,धेरै शब्द सम्झने सजिलो तरिका – Ujyaalo Patrika
पढेका कुरा ,धेरै शब्द सम्झने सजिलो तरिका
अब याद गर्ने सजिलो तरिका सिकौँ । त्यसपछि तपाईंलाई ती ३० वटा शब्द जस्ताको तस्तै याद आउँछन्, अगाडि–पछाडि दुवैतिरबाट ।
-एक नम्बरको शब्द सुन्तला हो । यसका लागि एउटा सुन्तला कल्पना गर्नुस् । त्यो सुन्तला कत्रो छ ? कस्तो छ ? सबै कल्पना गर्न सकिन्छ । यसरी कल्पना गर्दा वा मानसिक चित्र बनाउँदा सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भरसक पाँचवटै इन्द्रियको प्रयोग गर्दा स्मरण शक्ति बलियो हुन्छ ।
-कल्पनामा डुबेर आँखाले सुन्तलाको रङ हेर्नुहोस्, मुखले एकपल्ट सुन्तला भन्ने, त्यो सुन्तला तपाईंले खानुभयो भने कस्तो स्वाद हुन्छ, अनुभव गर्नुहोस् । कानले सुन्तला भनेको आवाज सुन्नुहोस् र नाकले सुन्तलाको गन्ध थाहा पाउने कोसिस गर्नुहोस् । त्यस्तै, छालाले कल्पनामै सुन्तलालाई छोएर अनुभव गर्नुहोस् ।
-पाँचवटै इन्द्रियको प्रयोग गर्नुभयो ? अब दोस्रो नम्बरमा चरा छ । यसलाई पनि त्यसै गरी कल्पना गरौँ । अब त्यो सुन्तलालाई चराले खाँदै गरेको कल्पना गर्नुहोस् । यसरी नै कथा बनाउन थाल्नुहोस् । दिइएका शब्दबारे दिमागमा चलचित्र नै बनाउनुहोस् । यो चलचित्र हिट बनाउने कि फ्लप, आफ्नै हातमा छ । हिट हुनु भनेको सबै कुरा सम्झिनु हो । अब सुन्तला खाँदै गरेको चराले गाडी (तीन नम्बर) कुदाउँदै गरेको कल्पना गर्नुहोस् । त्यसपछि चराले गाडी कुदाउँदै गर्दा एउटा हात्ती (४ नम्बर) अगाडि आएको र त्यो हात्तीले साइकल (५ नम्बर) कुदाउँदै गरेको कल्पना गर्नुहोस् । याद राख्नुस्, कल्पना गर्दा जति हाँसउठ्दो र आश्चर्यजनक बनाउनुहुन्छ, त्यति नै याद गर्न सजिलो हुन्छ । अब साइकल कुदाउँदै त्यो हात्ती हस्पिटल (६ नम्बर) गएको कल्पना गर्नुहोस् । जहाँ उसको साथी (७ नम्बर) भर्ना भएको छ । यो सबै कल्पना गर्दै जानुस्, एउटा हाँसउठ्दो र रमाइलो कथा बनाउँदै जानुहोस् । यसरी ३० वटै शब्दलाई सृजनात्मक तरिकाले चित्र बनाउँदै जानुहोस् । सकियो ? अब त्यो पूरै कहानी एकपल्ट आँखा चिम्लेर फेरि कल्पना गर्नुहोस् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।
-अब एउटा कागजमा ती ३० वटा शब्द लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् । कतिवटा लेख्न सक्नुभयो ? राम्ररी कल्पना गर्नुभएको थियो भने ३० वटै जस्ताको तस्तै लेख्न सक्नुहुन्छ । नसके पनि २०, २५ वटा त पक्कै पनि सकिन्छ । त्यो पनि क्रमबद्ध रूपमा । कति सजिलो रहेछ है याद गर्न । अबदेखि कुनै पनि कुरा याद गर्दा त्यसलाई चित्र या कथामा परिणत गर्नुभयो भने बिर्सिने समस्या हुँदैन ।
Next ‘म किन गरीब ?’ भन्ने प्रश्नमा बुद्धले दिएको यो जवाफ सुन्दैमा धनी बनिन्छ